दोस्रो अध्यक्ष कपको उद्घाटन खेलमा वडा नं. ७ विजयी - Pradesh Dainik
दोस्रो अध्यक्ष कपको उद्घाटन खेलमा वडा नं. ७ विजयी
पथरी, खेलकुद विकास समिति कानेपोखरी मोरङको आयोजनामा भएको दोस्रो प्रतिष्ठित अध्यक्ष कप–२०७६ को उद्घाटन खेलमा वडा नं. ७ विजयी भएको छ ।
शनिबार आइतबारेको खेल मैदानमा भएको खेलमा वडा नं. ७ ले वडा नं. २ लाई शून्यको विरुद्ध ५ गोलको अन्तरले विजयी भएको हो । मध्यान्तर अघि खेलको १७ औं मिनेटमा वडा नं. ७ को तर्फबाट रोषन साप्कोटाले १ गोल लगाउँर्दै खाता खोलेका थिए । त्यसैगरी खेलको २१ र २४ र्औ मिनेटमा कमल परियारले क्रमश २ गोल लगाएका थिए । त्यसैगरी मध्यान्तर पछि खेलको २२ औँ मिनेटमा आयम गुरुङले १ गोल र खेलको ३३ औँ मिनेटमा बद्रि कार्कीले १ गोल गर्दै ०–५ गोल गरेका थिए ।
त्यसैगरी वडा नं. २ ले गोल लगाउने धेरै प्रयास गरेता पनि वडा नं. ७ का गोल रक्षक र डिफेण्डरले गोल हुनबाट बचाउ गरेका थिए । खेलको म्यान अफ दि म्याच विजेता टोलीका कमल परियार घोषित भएका थिए । परियारले ट्रफि,मेडल पाएका थिए । आइतबारको खेल वडा नं. ३ र ४ विच खेल हुने आयोजक समितिका संयोजक भूपाल श्रेष्ठले जनाए ।
खेलकुद प्रवर्धन तथा खेलकुदको माध्यमबाट स्थानीय खेलाडीहरु उत्पादन गरी राष्ट्रिय र अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरमा उत्रन सक्ने खेलाडीहरु तयार गरी कानेपोखरीको मात्रै नभई देशको नाम चिनाउने हाम्रो उद्देश्य सहित खेलकुद सुरु गरेको हो ।
संजीव गुरुङको संयोजनमा मितेरी युवा क्लबको व्यवस्थापनमा वडा नं. ७ को आइतबारे खेल मैदानमा हुदै छ । फुटबल खेलको विजेताले ८० हजार र उपविजेताले ५० हजार, ट्रफि,प्रमाण पत्र र मेडल पाउने छ । कानेपोखरी विएण्ड वि कन्ट्रक्सन प्रालिका संचालक भूपाल श्रेष्ठले ७ वटै वडालाई १५ सेटको फुटबल जर्सी वितरण गरेको छ ।
खेलकुद विकास समिति कानेपोखरीले अध्यक्ष कप फुटबल, भलिबल, क्रिकेट, डमिन्टन,बुद्धिचाल,एथलेटिक्स,मैत्रिपूर्ण महिला फुटबल खेल र म्याराथुन लगाएतको खेल प्रतियोगिता सुरु गरेको छ ।
उद्घाटन खेललाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कानेपोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्ले पानसमा बत्ति बालेर उद्घाटन गरेका थिए । त्यसैगरी अतिथिहरु वडा नं। ५ का वडाध्यक्ष चरण गुरुङ, वडा नंं २ का वडाध्यक्ष सुशिल बुढाथोकी, वडा न. ७ का वडाध्यक्ष मोहनप्रसाद अधिाकारी,स्थानीय नेता भोला अधिकारी, सन्तोष फुयल, विवेक लिम्बु, मनोज राजवंशी, हिमप्रसाद तिम्सिना, कुमार फुयल, नविन पौड्याल लगाएत अतिथि रहेका थिए ।